Raha vao misy toerana somary malalaka amoron-dalana, dia misy mpivarotra iray manao tsena mora ravana, ny ampitson’iny dia misy iray ary mitombo hatrany. Mila fandraisana fepetra ara-potoana satria vao tsy misy tompon’andraikitra miteny, dia mody hitarina tsikelikely. Misy ny fandraisana fepetra amin’ny fanalalahana ny fifamoivoizana amin’izao fotoana izao, ka isan’ny tokony handraisana fepetra hentitra ireny satria toa zary fomba fiady saika hita manerana ny renivohitra.
Zavatra maro sokajiana ho tsy dia mety loatra no mandeha ho azy sy toa mbola misy ny manao izay saim-patany, toy ny taksibe mamorona fiantsonana (arrêt) amin’izay metimety aminy. Olona manary fako amin’ny fotoana sy ny toerana izay maha mety azy. Maro no miampita amin'ny arabe tahaka ny omby sanatrian’ny vava. Manjaka ny tsy firaharahiana, fitiavan-tena, santatry ny fandikana fitsipika sy fandikan-dalàna. Zava-dehibe ary tena amporisihina ny famerenana ny fitsipika (discipline) izay tsy maintsy atao handaminana ny fiarahamoninana sy hirosoana amin'ny tsara kokoa. Vao andro vitsy dia efa hita taratra ny filaminana amin’ireo toerana nandraisana fepetra toa ny eny Andrefan’Ambohijanahary sy Mahamasina, ka na andro tsena aza omaly tsy nisy fitohanana. Tsy maintsy misy fifampifehezana.rehefa miaina anaty fiarahamonina, tanàna, orinasa, firenena fa tsy hoe samy partrôan'ny tenany izany. Ilay fahataran'ny fandraisana andraikitra no mampiroborobo be ny sehatra tsy manara-penitra eto Madagasikara